Ma ogtahay in Ronaldo uu caawimaad waydiistay Barcelona si uu u ciyaaro kulanka Man City?…(Aqri sheekadan) – Gool FM
Ma ogtahay in Ronaldo uu caawimaad waydiistay Barcelona si uu u ciyaaro kulanka Man City?…(Aqri sheekadan)
(Madrid) 01 Maajo 2016. Xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo ayay ka go’antahay inuu ciyaaro kulanka Man City ee lugta labaad ee semi-finalka Champions League ee arbacada isagoona qaadaya tallaabo kasta taa oo xitaa ka riday inuu maciin waydiisto kooxda ay sida wayn u coltamaan ee Barcelona.
Wiilka reer Portugal ayaa weli la dhibtoonaya dhaawac muruqa ah kaa oo ku seegay lugtii hore ee wareega afar dhammaadka CL ee lagu soo ciyaaray Etihad Stadium kaa oo ku soo idlaaday 0-0.
Sida ay sheeganeyso jariiradda SPORT ee dalka Spain in Ronaldo uu qaati ka taagan yahay waaxda caafimaadka Real Madrid isla markaana uu kalsoonidii kala laabtay kaddib markii ay garan waayeen waxa haya amaba ay si qalad ah u soo saareen dhaawiciisa.
Waxayna intaa ku dartay jariiradda in Ronaldo uu dhakhaatiirta Real Madrid ku bahdilay inuu u sheegay inay la xiriiraan kuwa Barcelona isla markaana wax ka waydiiyaan fikirka labaad ee dhaawiciisa.
Inkastoo cadaawad xoogan kala dhexeyso kooxda Barcelona misane Ronaldo ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay xirfada dhakaatiirteeda.
Laakiin weli ma cada in Barcelona aqbali doonto dalabka kaga yimid dhanka Ronaldo iyo inay gacan siin doonaan midka ugu shidan kooxda ay coltamaan ee Real Madrid.
Claudio Ranieri oo aan daawan doonin kulanka Chelsea iyo Tottenham (Ogoow sababta)
Kadib guul daradii Man City, waa sidee tartanka booska 4-aad ee horyaalka ingiriiska?